Imibuzo engakholekiyo malunga neTekhnoloji yeCAD / GIS-iGeofumadas
Ikhaya/ArcGIS-ESRI/Imibuzo emangalisayo malunga nobuchwepheshe beCAD / GIS
ArcGIS-ESRIAutoCAD-AutoDeskUkuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Hay que estar detrás de las estadísticas de Google Analytics para ver algunas preguntas sorprendentes o gastar tiempo en Yahoo Answers para no perder el sentido del humor. Quisiera responder a cada una de ellas pero mi ironía es peligrosa y más si este es un post programado vía Wordpress y Live Writer ngelixa ndihamba.
1 Ndiqhuba njani i-ArcGIS?
Heck, kuyamangalisa kodwa lo mbuzo ukhona amaxesha ali-14 !!! Ke, ukuze bangaboni ukuba ndimbi, nantsi impendulo mega:
1.1 Cofa kwiqhosha elithi "Qala".
1.2 Cofa kwi "Zonke iiprogram."
1.3 Cofa kwi "ArcGIS".
Kwaye ekugqibeleni ngokuchofoza inkinobho yemouse ngakwesobunxele "kwi-ArcMap".
Isinyathelo singatshwankathela ukufaka i-ArcGIS uze ufunde ifayile ebizwa ngokuthi "readme_first.txt"
2 Ndijonga njani iifoto ezivela kwiGoogle Earth?
Njengoko uninzi lweengcali zithi, unqakraza ngokuchanekileyo kumgca wesithombe uze ukhethe ukhetho "ujonge ixesha langempela le-satellite NASA" njengoko libonakala kule khowudi.
3 Yiyiphi inkqubo enoncedo ngakumbi, iLinux okanye i-AutoCAD?
Njengoko uTxus angatsho, Thixo wam! Ukuba awuyikholelwa, jonga kwiimpendulo zikaYahoo, andiyibeki ikhonkco ukuze ungandiniki umbala ngamanqaku ali-10 aphume njengokushaya umntu onxilileyo.
4 Kutheni i-AutoCAD isondele?
Ndicinga ukuba ivulekile
5 Ndiyakwazi ukufaka i-AutoCAT kumatshini wam nge-2 GB?
Ukuba uthetha iToyota yakho ... andicinga ukuba kunjalo, ukuba uthetha i-AutoCAD, nokuba.
6 Ngaba kukho umntu osebenzisa i-AutoCAD?
Ewe, uqinisekile ewe.
7 Kukuphi ukukhuphela i-keygen kwi-AutoCAD 2009?
... kwaye unike
8. Ngaba kunokwenzeka ukuba i-AutoCAD 12, 2004 kunye ne-2009 ifakwe kumatshini omnye?
Ewe, ndingathanda ukucinga oko.
9 Ndingafumana phi ulwazi malunga ne-GIS yelizwe elincinci?
Kwimpendulo yokuqala evela kwiGoogle
10 Ndingayilungiselela njani ukusebenzisa iSicwangciso B?
Ummm, uthetha ukuba ipilisi eyaziwa ngokuthi "Ukususela ngosuku lwesibini"? Ukuze udibane nogqirha.
Ndiyaxolisa ukuba indlela yam yokuhlekisa namhlanje ayilunganga.
Umhlaba ka-Google Wordpress
Imodeli yobuchule esetyenziswa kwiCastastro
Njengoko ndiyazi, azikho iindlela ezininzi, ngaphandle kokuba uthenge ilayisensi yezicelo ze-cad-lock
Kodwa inkohliso inokuba yenze iibhloko zeendawo ezahlukileyo okanye indawo zoomzobo, kunye neendlela zokudibanisa ezahlukeneyo
Enye into enokuyenza kukuba kukunika njenge-dwf, nangona awukwazi ukuyibona nge-AutoCAD
Sawubona umbuzo wam:
Ndiyayixabisa ingqalelo yakho, imini enhle.
Kukho isicelo esibizwa ngokuthi shp2epa, esikuvumela ukuba uthumele iifayile zobume kwi-Epanet
Umbuzo omnye, ndiyathemba ukuba awusuki kwiforum, kodwa bendikhangela indlela yokuthumela iifayile ze-ArcGIS kwi-EPANET. Ndinombulelo ongazenzisiyo ngoncedo lwakho ...